ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများ Maslow, DeGraff, Taylor နှင့် Guilford အရ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ပစ္စည်းများကိုဖန်တီးရန်၊ ထုတ်ကုန်များရရှိရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဘဝတွင်မတူညီသောလိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်အထူးစွမ်းရည်ရှိသည့်လူများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏတွေ့ရှိလေ့ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်မတူကွဲပြားစွာပြုမူကြပြီး၎င်းသည်သူတို့၏လုပ်ဆောင်ပုံပေါ်မူတည်သည် တီထွင်ဖန်တီးမှု။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ အနည်းငယ်သိလိုပါကအောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးတွင်စာရေးသူမှတင်ပြသောတီထွင်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများကိုရှင်းပြသည်။
2.1 ၁။ Maslow အရတီထွင်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများ
2.2 2. တီထွင်ဖန်တီးမှု Jeff DeGraff အရသိရသည်
2.3 3. တီထွင်ဖန်တီးမှုအက်ဒွပ်တေလာအရသိရသည်
2.4 4. တီထွင်ဖန်တီးမှု Joy P. Guilford သည်နှင့်အညီ
တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်အလိုအလျောက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ သီးခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်၏ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးပြု၍ အခြေအနေတစ်ခုကိုအဖြေရှာရုံမျှဖြင့်ရနိုင်သည်။
၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှသာမကစွမ်းရည်မြင့်မားသောစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသိပ္ပံပညာနယ်ပယ်တွင်အကန့်အသတ်မရှိသောအသုံးချမှုများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ တိကျစွာဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တစ် ဦး ချင်းသူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိရသောတစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေတွင်မှဆင်းသက်လာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်, ထုတ်ကုန်များနှင့်အရည်အသွေးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပြီး, ထို့အပြင်ခုနှစ်, အတူတူပင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်။
ဤသည်မှာကွဲပြားခြားနားသောစာရေးဆရာများနှင့်ယခုအချိန်အထိထမြောက်တော်မူသီအိုရီအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်; ဒါပေမယ့်အထွေထွေအချက်ကနေသုံးခုရှိပါတယ် တီထွင်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်:
၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဖြေရှင်းရန်အတွက်အတွေးများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ခလစာအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုကိုထုတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်းသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုသည်မှာအတွေးအခေါ်များသည်လိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်ပြproblemနာနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကယ်၍ အတွေး၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အဖြေတစ်ခုပေးရန်ဖြစ်လျှင်၎င်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းလေ့လာလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းတီထွင်ဖန်တီးမှုသည်အသိပညာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်ဟုဤအကြောင်းပြချက်အတွက်တိကျမှန်ကန်စွာပင်ဖြစ်သည်။
နာမည်အရဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤကိစ္စတွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်များကိုမတော်တဆပြုလုပ်မိခြင်းကြောင့်ရလဒ်ကောင်းများရရှိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုး၏ဥပမာတစ်ခုအား“ serendipity” ဟုသိကြသူများနားလည်သည်။
၁။ Maslow အရတီထွင်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများ
Maslow အဆိုအရဖန်တီးမှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်အလွန်အရေးကြီးသောဒြပ်စင်များဖြစ်သည်ဟုယူဆကြပြီးမတူညီသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရသော်လည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းတွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း၊
မူလတန်းတီထွင်ဖန်တီးမှုသည်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည် ဖန်တီးမှုလှုံ့ဆော်မှု။ ဒါဟာအလိုအလျောက်နှင့်ကြံဆတီထွင်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်မကြာခဏပွဲလမ်းသဘင်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူတီထွင်သည်, တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်လူတစ် ဦး စီ၏သဘာဝနှင့်အထူးအရည်အသွေးဖြစ်သည်။
2. တီထွင်ဖန်တီးမှု Jeff DeGraff အရသိရသည်
ပါမောက္ခနှင့်သုတေသီ Jeff DeGraff သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားငါးမျိုးအားခွဲစိတ်မှု၊ နှိုင်းယှဉ်မှု၊ နှိုင်းယှဉ်မှု၊
Mimetic Creativity ဆိုသည်မှာရှိပြီးသားအရာတစ်ခုခုမှဖန်တီးနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤဖြစ်စဉ်မှရရှိသောအရာများသည်အတုအယောင်အတုအယောင်များသို့မဟုတ်မိတ္တူကူးယူမှု၏ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုအဆင့်မှာအတော်အတန်နည်းသည်။
အခြားသူများရဲ့အတုကိုရည်ညွှန်းဖို့အသုံးပြုတဲ့ "mimetic" ဆိုတဲ့နာမဝိသေသန "mimesis" ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာပါ။ ၎င်းသည်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏အခြေခံအကျဆုံးအမျိုးအစားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။ တိရိစ္ဆာန်များမှပင်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ပညာရေးနယ်ပယ်တွင်အခြားဘာသာရပ်တစ်ခုတွင်ရရှိသောကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များသို့မဟုတ်ဗဟုသုတများကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်ပေါ်ပေါက်လာသောအတွေးအခေါ်များသည်ရရှိလာသောဗဟုသုတများ၏ဆက်နွယ်မှုမှကွဲပြားခြားနားသောနှိုင်းယှဉ်ချက်များ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမသိသောအရာများကိုနားလည်နိုင်ရန်လူတစ် ဦး ချင်းသည်သူတို့သိသောသူတို့ထံချဉ်းကပ်သည်။ တူညီခြင်းနှင့်ဥပစာစကားများအပေါ် အခြေခံ၍ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အသစ်ကိုကြေငြာနိုင်သည်။
La bisociative တီထွင်ဖန်တီးမှု ၎င်းသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်နှစ်ခုကိုအတူတကွပေါင်းစပ်လိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်တစ်ခုခုကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန် ဦး တည်သည်။ ၎င်းကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဤရွေ့ကား bisociation အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များ၏အစည်းအဝေးအားဖြင့်ထုတ်ယူ, ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အချို့သောအချက်မှာလိမ္မာလမ်းအတွက်စီစဉ်နိုင်သည့်တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မည်နှင့်အတူတူပင်၏စီးဆင်းမှုရရှိရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည် ရလဒ်။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ပုံပြင်များဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုအထူးရည်ညွှန်းသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၎င်းသည်ဇာတ်ကောင်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လှုပ်ရှားမှု၊ အချိန်၊ ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းအမျိုးအစားနှင့်စကားဝိုင်း၊ ဖော်ပြချက်နှင့်ကောင်းသောသဒ္ဒါလေ့ကျင့်ခန်းစသည့်အရင်းအမြစ်များစသည့်ဇာတ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
၎င်းအတွေးအခေါ်သည်မူလတည်ရှိခဲ့သောရုပ်ပုံများ (သို့) ဗဟုသုတများအပေါ်အခြေမခံသောကြောင့်၎င်းတို့သည် abstraction အတွက်ကျယ်ပြန့်သောစွမ်းရည်လိုအပ်သည်။
အလိုအလျောက်ဖန်တီးမှုသည်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အလွန်အသုံး ၀ င်သောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာအခြေအနေတိုင်းတွင်အဖြေရှိသည်ဟူသောနိယာမကို အခြေခံ၍ အတွေးအခေါ်များကိုတီထွင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ရှိပြီးသားဗဟုသုတမှရရှိသောကန့်သတ်ချက်များကိုလုံးဝချန်လှပ်ထားသည်။
ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် နှိုးဆွနိုင်တီထွင်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများ သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်စင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သတိကိုနိုးထစေသောကြောင့်ဘာဝနာနှင့်ယောဂကျင့်စဉ်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးသည်။
Alfred Edward တေလာသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုအားတစ် ဦး ချင်းတွင်ထင်ရှားစေသည့်နည်းလမ်းငါးခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
၎င်းသည်ဘ ၀ ၏ပထမနှစ်များတွင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်မွေးရာပါဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်လူတစ် ဦး စီ၏စွမ်းရည်များပါဝင်သည်။ အခြားကျွမ်းကျင်မှုများကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်သည်။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆိုလိုသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏လက်တွေ့ကျသောသဘာဝကြောင့်လူသိများသောတီထွင်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Taylor ၏အဆိုအရ Degraff ၏ထူးခြားချက်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်မှာသူသည်အသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်အရှုပ်ထွေးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည်လုံးဝတီထွင်ဆန်းသစ်သောအခြေခံမူများ၊ သဘာဝအားဖြင့်၎င်းကိုကြိုတင်ပုံရိပ်များနှင့်ခွဲခြားထားသည့်အတွက်အခြားဖော်ပြထားသောအဆင့်များမှနားမလည်နိုင်ပါ။
4. တီထွင်ဖန်တီးမှု Joy P. Guilford သည်နှင့်အညီ
နောက်ဆုံးတွင် Joy P. Guilford သည် Degraff နှင့် Taylor တို့၏ကွဲပြားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားကိုတင်ပြသည်။
အဲဒါပါပဲ ဝိသေသနှင့်ကြီးစိုးတီထွင်ဖန်တီးမှု လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်၎င်းသည်သူတို့ခံယူခဲ့သောလေ့ကျင့်သင်တန်းအမျိုးအစားနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
phylogenetics နှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုသည်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စွမ်းရည်သို့မဟုတ်စွမ်းရည်များမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုအလားအလာသည်လူတစ် ဦး ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုပေးသောကြောင့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးတွင်ပေါ်လာသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဖော်ပြချက် (သို့) ထုတ်ကုန်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါဟာ kinetic အမျိုးအစားနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏အမည်ကိုဖော်ပြသကဲ့သို့, ကလှုပ်ရှားမှုဆိုလို။ Kinetic တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်တွင်သူ့ဟာသူထင်ရှားပြသည်။
ဖော်ပြရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်မတူညီသော ဦး နှောက်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် (၎င်းသည် ဦး နှောက်၏ညာဘက်ခြမ်းနှင့်အဓိကသက်ဆိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း); အရာတစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ် ဦး အတွက်တစ် ဦး အထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်တီထွင်နေကြသည်။ ပညာရေး၊ အလုပ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနယ်ပယ်တွင်၎င်းကိုနားလည်ရန်နှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ရန်၎င်းတို့ကိုကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းအမျိုးမျိုးကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » အတွေ့အကြုံများ » ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများ Maslow, DeGraff, Taylor နှင့် Guilford အရသိရသည်